Khabiirka Kala Duwan: Python iyo BeautifulSoup. Meelaha Gawaarida leh ee fudud
Markaad fulinayso falanqaynta xogta ama mashaariicda mashaariicda mashaariicda, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bogto bogag internetka ah si aad u heshid ( xogta loo baahan yahay iyo dhamaystirka mashruuca. Luqadda barnaamijka Python waxay leedahay ururin xoog ah oo ah qalab iyo modules kuwaas oo loo isticmaali karo ujeedadan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa moduleka quruxda leh ee quruxda leh ee qurxinta HTML.
Halkan, waxaynu eegaynaa BeautifulSoup oo ogaaneysaa sababta ay hadda ugu badan tahay in loo adeegsado shabakadda webka .
- Waxay bixisaa habab kala duwan oo loogu talagalay navigal sahlan, raadinta iyo wax ka beddelka dhirta dhirta si ay kuu oggolaato inaad si fudud u kala saartid dukumiintiga oo aad soo saarto wax kasta oo aad u baahan tahay iyada oo aan la qorin koodh badan.
- Waxay si toos ah ugu rogeysaa dukumiintiyada soo socda ee UTF-8 iyo dukumintiyada soo socda ee Unicode. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan ka walwalsanayn codsiyada la bixinayo haddii dukumiintigu ay tilmaamayaan codsi ama Qurxoon quraac.
- BeautifulSoup waxaa loo tixgeliyaa inuu ka sareeyo caanaha kale ee Python sida html5lib iyo lxml. Waxay u ogolaanaysaa in ay isku dayaan istiraatiijiyado kala duwan oo kala duwan. Mid ka mid ah faa'iido darrida modulekaan, si kastaba ha ahaatee, waa in ay bixisaa dabacsanaan dheeraad ah kharashka xawaaraha.
Maxaad u baahan tahay inaad bogto shabakad leh BeautifulSoup?
Si aad u bilowdo la shaqeynta BeautifulSoup, waxaad u baahan tahay inaad sameysatid jawi barnaamijka Python (ama mid ku salaysan maxaliga ama server-ku-saleysan) oo ku rakibaya mashiinkaaga. Python badanaa waxaa lagu dhejiyaa OS X, laakiin haddii aad isticmaasho Windows, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso oo luuqad ka sameyso website-ka rasmiga ah.
Waa inaad haysataa hababka BeautifulSoup iyo Codsiyada Codsiyada.
Ugu dambeyntii, noqoshada iyo raaxeysiga la shaqaynta HTML bogga iyo qaab-dhismeedka waa mid aad u faa'iido badan maadaama aad la shaqeyn doonto xogta websaydhka ah.
Soo-celinta Codsiyada iyo Maktabadaha BeautifulSoup
Iyada oo leh bay'ad barnaamijka Python si fiican u dhisto, waxaad hadda abuuri kartaa faylal cusub (adigoo isticmaalaya nano, tusaale ahaan magac kasta oo aad jeceshahay).
Maktabadda Codsiyada waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho foomka HTTP ee barnaamijyada Python halka BeautifulSoup ay ku heleyso xoqitaanka si dhakhso ah. Waxaad isticmaali kartaa waraaqaha soo dejinta si aad u hesho maktabadaha labadaba.
Sida loo ururiyo oo loo kala saaro bogga internetka
Isticmaal codsiyada. helitaanka
habka aad u soo uruuriso URL bogga shabakadda kaas oo aad rabto inaad soo qaadato xogta. Marka xigta, abuur shayga quruxda leh ee BeautifulSoup ama geed qashinka ah. Shaykani wuxuu ka qaadaa dukumeentiga codsiyada sida dooddeeda oo dabadeedna jeexaya. Iyada oo bogga la ururiyey, kala saaro oo loo aasaasay sida shayga BeautifulSoup, ka dib waxaad sii wadi kartaa inaad ururiso xogta aad u baahan tahay.
Soo saarida qoraalka aad doonayso inaad ka hesho bogga internetka ee la ciriiriyey
Mar kasta oo aad rabto inaad ururiso xogta webka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida macluumaadkaas lagu sharxay Qoraalka Naqshadda Qoraalka (DOM) ee bogga internetka. Barta shabakadaada internetka, adigoo riixaya (haddii aad isticmaaleysid Windows), ama CTRL + guji (haddii aad isticmaalayso macOS) mid ka mid ah waxyaabaha ka kooban qayb ka mid ah xogta xiisaha leh. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad jiidato xogta ku saabsan jinsiyadaha ardayda, riix mid ka mid ah magacyada ardayga. Qoraalka macnaha guud wuxuu ka bilaabmayaa, oo ku dhexyaal, waxaad arki doontaa sheyga la midka ah Element Element (Firefox) ama Kormeer (ee Chrome). Riix shayga menu ee kormeerka ku haboon, iyo qalabyada horumarinta webka ayaa ka muuqan doona shabakadaada.
BeautifulSoup waa qalab sahlan oo awood leh oo sahlan oo HTML ah kaas oo kuu oggolaanaya inaad si aad ah u dabacsan markaad bogga internetka . Markaad isticmaashid, ha ilaawin inaad ilaaliso sharciyada qashinka ah sida hubinta shuruudaha iyo shuruudaha shabakadda; dib u soo celinta goobta si joogta ah iyo cusbooneysiinta lambarkaaga sida isbeddelada laga sameeyay goobta. Lahaanshaha aqoontan ku saabsan websaytka kaydka leh Python iyo BeautifulSoup, waxaad si fudud u heli kartaa xogta webka ee aad u baahan tahay mashruucaaga Source .